Efa nandrandraina ela ary tanjon’ny Andro fandroana ny fanajariana io hasim-piandrianana io. Rariny raha mahafaly ny Gasy rehetra ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izany, hoy i Robert Randrianatoandro raiamandreny ara-drazana ao amin'ny tranoben' Imerina Ambohimanga. Tokony heverina ihany anefa ny fanehoana fifaliana ndrao mamery hasina antsika tsirairay indray, Tsy mety ary tsy tokony hatao ny manitsaka na manosy ny saina na sarin-tsaina maha firenena antsika. Olana amin'izany ireo kapa miparitaka eny an-tsena misy ny anaran'ny ekipa Malagasy sy ny sainam-pirenena. Tsy natao hiadivana amin'ny mpandraharaha anefa izany fa mba hifanajana amin'ny zo aman-kasin'ny vahoaka manontolo.